Football Khabar » बार्सिलोनाको एकेडेमीबाट उत्पादित ‘जापानी मेस्सी’लाई रियलले भित्र्यायो !
बार्सिलोनाको एकेडेमीबाट उत्पादित ‘जापानी मेस्सी’लाई रियलले भित्र्यायो !
‘जापानी मेस्सी’ भनेर चिनिएका जापानका युवा फुटबलर ताकेफुसा कुबोलाई स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले अनुबन्ध गरेको छ । स्पेनकै अर्को ठूलो क्लब बार्सिलोना पनि कुबोलाई अनुबन्ध गर्न हात धोएर लागेको थियो । कुबो बार्सिलोनाको एकेडेमीबाट उत्पादित खेलाडी हुन् ।
तर, अन्तिम समयमा रियलले १८ वर्षीय युवा खेलाडीलाई बेर्नाबेउमा उतार्न सफल भयो । रियलले जापानी क्लब टोक्यो एफसीबाट कुबोलाई ६ वर्षका लागि सझौता गरेको हो । रियलले उनका लागि २ मिलियन युरो खर्चेको छ । उनले रियलबाट हरेक सिजन १ मिलियन युरो पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
रियलले तत्काललाई कुबोलाई ‘बी’ टिममा राखेर खेलाउनेछ । अर्को सिजनबाट उनले सिनियर टोलीमा डेब्यु गर्ने सम्भावना छ । कुबोले भर्खरै सकिएको सिजनमा टोक्योका लागि १३ खेलबाट ४ गोल गरेका थिए । उनले तीन लिग कप खेल्दा त्यहाँ पनि १ गोल गरेका थिए ।
जुन ९ मा जापानको राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका कुबो अहिले कोपा अमेरिका खेल्ने टोलीमा समेत सामेल छन् । उनी अट्याकिङ मिडफिल्डरको पोजिसनबाट खेल्छन् ।
यसअघि कुबोले सन् २०११ देखि सन् १५ सम्म बार्सिलोनाको एकेडेमीमा बिताएका थिए । त्यसपछि उनी सन् २०१५ मा बार्सिलोना छाडेर एफसी टोक्योमा अनुबन्ध भएका थिए ।
कुबोलाई धेरैले बार्सिलोनाका स्टार फरवार्ड लिओनल मेस्सीसँग तुलना गर्ने गर्छन् । किनभने, कुबोले खेल्ने शैली मेस्सीकै जस्तो छ । उनलाई कतिपयले बार्सिलोनामा मेस्सीका उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्दै आए पनि अन्तिम समयमा आएर रियलले कुबोलाई उछिट्यायो ।
बार्सिलोना आफ्नै एकेडेमीबाट उत्पादित जादुयी खेलाडी कुबो भित्र्याउने दौडमै रहेका बेला रियलले बाजी मारेको हो । अब कुबो रियल मड्रिड आएपछि रियलले नयाँ उचाइ पाउने फुटबल विश्लेषकहरूको निचोड छ । अद्भुत क्षमता भएका कुबोलाई धेरैले रियलको भविष्यका सुपरस्टार ठानेका छन् ।
प्रकाशित मिति ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १३:२१